သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုရှင် ရခိုင်က ကံထူးသူလေး - BBC News မြန်မာ
သိန်း ၁၅၀၀၀ ဆုရှင် ရခိုင်က ကံထူးသူလေး - BBC News မြန်မာ 5
အခုနှစ်ပိုင်းထဲ ရခိုင်ကသတင်းတွေဟာ စစ်ပွဲနဲ့အနိဋ္ဌာရုံတွေသာ အများစု ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတခါတော့ စိတ်ကြည်နူးဖွယ် ရခိုင် က အမျိုးသမီးငယ်လေးအကြောင်း ကြည့်ကြရမှာပါ။
ရိုက်ကူး - မြင့်လွင် ၊ တည်းဖြတ် - ၀င်းကျော်သူ
#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #အောင်ဘာလေ #ထီလက်မှတ် #ကံထူးသူ #စစ်တွေ #ရခိုင်
သာလီစြာပါ .၀မ္းသာလုိက္တာဗ်ာ. အမ်ားအက်ဳိးသယ္ပုိးႏုိင္ပါေစ
Author — mosesahphu htay
Author — Sai aung htoo
ရခိုင္​ျပည္​သူ ​ေတြ ဒုကၡ ​ေရာက္​​ေနၾကတာ ထီ​ေပါက္​​ေတာ့ ဝမ္​းသာစရာ​ေပါ့
Author — Lin Thit
ဝမ်းသာပါတယ်... ကြည့်တာနဲ့တင် ကိုယ်တွေ တောင် ပျော်မိပါတယ်... မြန်မာပြည်က တခြားသူများလည်း ထီတွေပေါက်ကြပါစေ.. ချမ်းသာကြပါစေ.. ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ...
Author — Naing minhtun
ေကာင္းေရ ကံထု႐ွင္တစ္ေယာက္ ရခိုင္ကျဖစ္လားစာ
Author — ze ro
AAကို သိန်း ၅၀၀၀ လောက်တော့ ပေးရမယ် မပေးရင် ဟိုက လာသတ်မှာ🤣🤣
Author — Htoo Htoo
HOP ABOARD BURMA'S 'SLOW TRAIN' - BBC NEWS
ကိုဗစ် စီးပွားကုစားရေး ကော်မတီ ဘာတွေ လုပ်နေသလဲ - BBC News မြန်မာ
ရွေးကောက်ပွဲသတင်းတွေ ထိပ်တန်းရောက်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ် - BBC News မြန်မာ
ဘရာဇီးဟာ ကိုရိုနာ ဗဟိုချက် ဖြစ်လာ - BBC News မြန်မာ
သင်္ဘောသီးထောင်း နဲ့ ကြက်ဆီထမင်း ရောင်းနေရတဲ့ စိန်သီး
ဝါရှင်တန်က အိမ်ဖြူတော်အနီးမှာ မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ ဆန္ဒပြပွဲသူတွေကို လူစုခွဲ - BBC News မြန်မာ